Pay As You Earn iSiZulu
Accreditation for Preferred Trader
Air Passenger Tax
SARS Home > Types of Tax > Pay As You Earn
Managing your Employer Account
Statutory rates and tables
INTELA YABASEBENZI [INHLAWULO-NGANZUZO (PAYE)]
14 kuMandulo 2016 – Ingabe zikhona izihibe onazo nge-e@syFile™?
Ngenzenjani mayelana nokuthuthwa kwezitifiketi eziyisinyatheliso?
Ngizigcwalisa kanjani izikhala ezintsha ‘zeMiphumela Yokuqinisekiswa ezingekho kwizetifiketi’ kanye nezeNtela ekhokhwe egameni labasebenzi kwi-EMP501 entsha?
Ngithola isimo ‘se-duplicate’ kwisilinganiso lapho kungenazinguquko khona ngezamba ezazidaluliwe kwi-EMP501?
Bheka uhlu lwethu oluphelele lwemibuzo nezimpendulo i- e@syFile FAQ's.
1 kuMandulo 2016 – Ukulinganisa Kwesikhashana Komqashi 2016
Abaqashi bayacelwa ukuba balethe i-EMP501 baqinisekise kumbe balungise izamba abazidalulile maqondana neNhlawulo Nganzuzo (PAYE), neNtela Yokuthuthukiswa Kwamakhono (SDL), neSikhwama Somshwalense Wokungasebenzi (UIF), kanye noMhlomulo Wentela Yabaqashi (ETI) kuma –EMP201 abawalethile, kanjalo nabakukhokhile kanye nenani LeZitifiketi Zentela Yabasebenzi [IRP5/IT3(a)]. Ukulinganisa kwesikhashana ngokwemisebenzi yesithuba sezinyanga eziyisithupha kusukela ngo 1 kuNdasa kuya ku-31 kuNcwaba kanjalo kufanele kulethwe phakathi kukaMandulo noMfumfu.
KwiSilinganiso Sabaqashi Sesikhashana sika-2016 lemithetho kanye noguquko lokusebenza kufanele kuqashelwe:
Kusukela ngo 1 kuNdasa 2016 izinkokhelo zezikhwama eseMpesheni, esikaDekle nesoMhlalaphansi seziyabanjelwa enteleni yokuholela.
Sekwenziwe amakhodi okusebenza (3817, 3825, 3828) ukuze kuhlukaniswe izinkokhelo zikaDekle nezoMhlalaphansi bese kuba nekhodi yokusebenza (4582) yokuveza inani eliphelele lesamba “somholo” lapho ikhodi ivumela ukuhlakanisa okungu 20/80
Kuqaliswe inzuzo yezentela yezindleko zezempilo kwenzelwa labo asebeneminyaka engaphezu kuka-65 abasasebenza
Kwenziwe ikhodi yokusebenza entsha (4120) ukuze kufakwe inzuzo yezentela yezindleko zezempilo yabasebenzi abaneminyaka engaphezu kuka-65 ubudala
Abakhokhintela sebezokwazi, ukuletha izicelo zokulungisa okuhambisana nesithuba sokuqinisekisa ngemva kokuba ukuqinisekisa sekuphothuliwe. Imiphumela yokuqinisekisa izokwaziswa abakhokhintela nge-imeyili yakhe abanayo abakwa-SARS emarekhodini abo, izincwadi ziyoposelwa kuphela abakhokhintela abangenayo i-imeyili emininingwaneni yabo.
I-EMP501 isibuyekeziwe ukuze ivumele abaqashi ukushicilela kokubili i-EMP501 kanye ne IRP/IT3 (a) kungumthamo owodwa. Kukhona futhi nekhethelo lokuba abakhokhintela babhale ikheli leposi ngendlela ethandwa yibo engenamigomo.
Ukuphuculwa kwe-e@syfile Employer kubandakanye nokukhushulelwa kwayo ku-Windows 8, kanye nasekushicileleni ngomthamo izitifiketi ze-IRP5/IT3(a)
Ukufakwa kwezimbuyiselo ze-EMP201 zangaphambili kuka-1999 kuzovunyelwa.
22 kuNcwaba 2016 – Isilinganiso Sabaqashi Samaphakathi Nonyaka esiqala ngo-1 kuMandulo 2016
Abaqashi balindeleke ukuba balethe kwa-SARS Izidaluli Zokulinganisa Zabaqashi Zonyaka (EMP501) ZeNhlawulo-Nganzuzo (i-PAYE) phakathi kuka 1 kuMandulo kanye no-31 kuMfumfu 2016, beqinisekisa noma belungisa izamba zentela yokuholela ebezidalulwe ngesithuba sika 1 kuNdasa kuya ku-31 kuNcwaba 2016.
18 kuMbasa- 2016 - Isilinganiso Sabaqashi Sonyaka
Ukulinganisa Konyaka KoMqashi kuqala zili-18 kuMbasa 2016. Zilungiselele, qala manje uhlanganise yonke imininingwane yakho futhi uzibhalise kwizaziso ze-RSS ukuze uhlale unolwazi.
1 kuMbasa 2016 – Isilinganiso Sabaqashi Sonyaka
Abaqashi kulindeleke ukuba bethule Isilinganiso Sabaqashi Sonyaka seNhlawulo Nganzuzo maphakathi nomhla we-18 kuMbasa kuya zingama-31 kuNhlaba ku-2016 kwa-SARS, beqinisekisa noma belungisa isamba sentela yokuholela abayidalula ngo-2015/2016
Kulo nyaka abaqashi bayanxenxwa ukuba baqinisekise kahle futhi babuyekeze imininingwane yezezimali zomsebenzi ngamunye andukuba balethe kwabakwa-SARS Izidaluli Zezilinganiso Zonyaka (i-EMP501) kanye NeZitifiketi Zentelangeniso Zabasebenzi [IRP5/IT3 (a) s].
Uma le mininingwane ingalungile kwisitifiketi se-IRP5, umsebenzi angeke akwazi ukufaka Imbuyiselo YeNtelangeniso Yomuntu (ITR12) ngeSikhathi Sentela. Abantu ngeke besavunyelwa ukuba balungise imininingwane yama-IRP5 ebisifakwe ngaphambilini ezimbuyiselweni zabo.
Lapho imininingwane ingaqondile, abasebenzi kuzofanele baxhumane nabaqashi babo nokuyibo okuzomele benze izinguquko kuma-IRP5 bese bewaletha futhi kwa-SARS. Lolu hlelo lungadla isikhathi futhi lungaba yinkinga kubasebenzi ekubambeni isikhathi sezimbuyiselo.
Abaqashi banegalelo elikhulu emzuliswaneni wentenlangeniso nozoqala zili-18 kuMbasa ngokulethwa kwezilinganiso zonyaka. Sithembele kubambiswano lwenu ekuletheni ngokungenazinselele ama-ITR12 ekuhambeni konyaka abo bonke abathintekayo. Udinga usizo? Shayela iCall-Centre yakwa-SARS KU 0800 00 7277.
20 kuMasingana 2016 - I-BRS ka-2017 yezilinganiso ze-PAYE isishicililwe:
Ukuhlalukiswa Kwezidingo ZaseBhizinisini
I-BRS – Izilinganiso ze-PAYE zika-2017 KUSHA!
2017 Ukulinganisa Kwabaqashi Konyaka
(1 kuNdasa 2016 – 28 kuNhlolanja 2017)
I-BRS – Izilinganiso ze-PAYE zika-2015/16
​Izilinganiso Zabaqashi Zonyaka zika-2016
(1 kuNdasa 2015 - 29 kuNhlolanja 2016)
Nezilinganiso Zabaqashi Zonyaka zika-2015
(1 kuNdasa 2014 - 28 kuNhlolanja 2015)
Intela Yabasebenzi isho intela okudingeka ithathwe ngumqashi emholweni okhokhelwe umsebenzi noma ozokhokhwa. Uhlelo lokuthatha noma lokubamba intela emholweni njengokuzuzwa ngumsebenzi lwaziwa nge-PAYE.
Umqashi obhalisiwe noma okudingeka abhalisele i-PAYE noma Intela Yokuthuthukiswa Kwamakhono (i-SDL) nabakwa-SARS blekudingeka futhi ukuba abhalisele izinkokhelo Zesikhwama Somshwalense Wokungasebenzi (i-UIF) kwa-SARS
Imali ethathiwe noma ebanjiwe kufanele ikhokhwe ngumqashi kwabakwa-SARS nyanga zonke ngokungcwalisa Isidaluli Sabaqashi Sanyanga Zonke (i-EMP201). I-EMP201 iyisidaluli sokukhokha lapho umqashi edalalu khona akukhokhile sekuphelele kanye nezabelo ze-PAYE, zeSDL, ze-UIF, Umhlomulo Wentela Yokuqasha (i-ETI), uma ikhona. INombolonkomba Yokukhokha (i-PRN) ekhethekile izophuma ne-EMP201, futhi yiyo ezosetshenziselwa ukuxhumanisa ukukhokha nokudalulwa kokukhokhwa kwaleyo-EMP201 okuqondene nayo.
Kukhokhwa kanjani futhi kukhokhwa kuphi?
Kufanele kukhokhwe ezinsukwini eziyisikhombisa ngemva kokuphela kwenyanga okwakubanjwe ngayo leyo mali. Uma usuku lokugcina lokukhokha luyiholidi kumbe impelasonto, kufanele kukhokhwe ngelanga lokugcina lokuhweba andukuba kube yiholide noma impelasonto.
Yilezi zindlela zokukhokha ezikhona (kusukela ngo-1 kuMbasa 2016):
Ukukhokha ebhange: Konke kungakhokhwa kunoma yiliphi igatsha lakwa-ABSA, Albaraka Bank Limited, Bank of Athens, Capitec, FNB, Habib Bank Zurich (HBZ), HSBC, Nedbank, Mercantile kumbe lakwa-Standard Bank.
Akusezukuvunyelwa ukuzozikhokhela mathupha kwa-SARS. Amasheke aposiwe/alethwe kwa-SARS azobuyiselwa kowathumele.
Qaphela: Qonda ukuthi lezi zinguquko zishiya ngaphandle abezeMithekelo.
Abaqashi abakhokha, noma abangase bakhokhe Intela Yabasebenzi edlula ku-R10 million kunama yisiphi isikhathi izinyanga ezili-12, kufanele balethe isidaluli Sentela Yabasebenzi futhi bakhokhe nge-inthanethi
Last Updated: 14/08/2017 2:01 PM ​